မောင်ကျောက်ခဲ(မြန်မာပြည်): အစိုးရရဲ့ ဓါတုလက်နက် ဆိုတာ ???
ဒီနေရာမှာ ပါးစပ်ပေါက်တွေပိတ် ပေးနေပါသည်။
(သိတာပဲပြောမည် ၊ တတ်တာပဲပြောမည် ၊ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မပြောဘူး )
သတင်းများပေးပို့ရန် အတွက်kyautkhae.myanmar@gmail.comအယ်ဒီတာ ထံသို့ အကြံပြု ဝေဖန်လိုလျှင်admin@mgkyautkhae.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် ။ ရေးသားဖော်ပြခဲ့သမျှတွေ
ပြောင်းလဲမှုခြေလှမ်းအမှတ်(၁) နှင့် NLD(ညု)
မြောက်ပိုင်း လိုင်ဇာ နှင့် တောင်ပိုင်း ဧရာဝတီ တိုင်း အနှံ့သွားသော်လည်း ခါးမနာခဲ့သည့် နေမျိုးဇင် ရက်ပိုင်းထောင်ကျ၍ ရုတ်တရပ်ခါးနာ
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေး တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်
အာပလာ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက် အား ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေမှ အပြတ်အသက် အနိုင်ရ
နွားကွဲရင်တော့ ကိုးတောင်ကျားကြီးတွေက ဥပုပ်မစောင့်ဘူးနော်........
မုဒိန်းမှူများပြားလာခြင်းရဲ့တရားခံ ကာမ အားတိုးဆေးများ (မောင်ကျောက်ခဲ အဖွဲ့) လိင် အမှူ ပွေမိရယ်တဲ့ စကာင်္ပူ
်မကြာသေးမီလများအတွင်း လူသိရှင်ကြား မကောင်းသတင်းတွေ ဟာ အံ့သြလောက်စရာ အရေအတွက်နဲ့ စင်္ကာပူသတင်းစာ ခေါင်းကြီး ပိုင်းတွေမှာ နေရာယူခဲ့ပါတယ်...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်သားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်၊ မြအေး နှင့် အပေါင်းပါများ ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်(ရန်ကုန်)မှဟန်ဝင်းအောင်၊အောင်စိုး ကျော...
ဘင်္ဂလီကုလား-ရခိုင် အရေးပြီးတော့ ကုလား-ဗမာ အရေးစတော့မလား မေးခွန်း သာကေတက မြန်မာမျိုးသမီးနဲ့ အာရဗီဘာသာစာသင်ကျောင်းတိတ်တဆိတ်ဖွင့်ထားတဲ့ကုလားမ ရ...
ဣိတ္တိယမုဆိုး ခင်မောင်စိုးရဲ့ RFA ရုံးတွင်း လိင်မှုဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုများ(အသံဖိုင်+စာ)
ကို လိုချင်တဲ့အချိန် လိုချင်တာမှန်သမျှ ကိုစိတ်အစာပြေအောင် ငယ် အမျိုးမျိုးလုပ်ပေးခဲ့တာ..ဟင့်.... ကိုစိုး ကို့ကို ငယ် ဘယ်လောက်သိပ်ချစ်လ...
ကျွုန်ုပ်တို့ ၏ ထို ..တိုင်းပြည် သောက်ရေသန့် ဘူးထိုင်ရှိခိုးတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ သမ္မတရားစွဲမယ်ဆိုပြီး...
» အစိုးရရဲ့ ဓါတုလက်နက် ဆိုတာ ???
နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့က အွန်လိုင်းကခင်တဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်က လက်တို့ ပေးလို့ သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရတယ်..လက်နက်အကြောင်းနည်းနည်းပါးပါး သိထားသူ
ဗန်းမော်ခရိုင် မိုးမောက် မြို့ နယ် ဖကော်န် ဒေသတိုက်ပွဲများမှာ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်က ဓါတုလက်နက်
နဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လို့ ရေးထားတာတွေ့လိုက်တော့ တော်တော်လေး ခေါင်းစား သွားတယ်.။လာပြန်ပြီကောလ
အော် --- သူတို့ကိုယ်သူတို့လက်နက်ကိုင်တွေထဲမှာ အင်အားအတောင့်ဆုံး စည်းကမ်းအရှိဆုံး တိုက်ရည်အတော်ဆုံး တပ်မဟာတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ တပ်ဖွဲ့ကြီးက ဒီလို ကလေးကလား အလုပ်တွေ တအားလုပ်တာ
ရှင်းရှင်းလေးတွေးကြည့်ပေးပါ.ဓါတုလက်နက် ဆိုတာ လက်ထဲထားရင်တောင် နူကလီးယား လက်နက်ထက်တောင် အန္တရာယ်ရှိတယ်..။မြန်မာနိုင်ငံမှာ နူကလီးယားခြေလှမ်းစမယ်ဟေ့ လို့
ဆိုရင်တောင်နှစ်ပေါင်းများစွာလိုက်ယူရအုံးမှာပါ..။ဓါတုလက်နက် ထိမ်းသိမ်းမှု ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ
ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့လက်ဝယ်နည်းပညာ မဆိုနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တောင် တော်တော်လေး ထိမ်းရသိမ်းရခက်တဲ့
အနေအထားပါ..။ဘယ်လိုမှ ၁၀၀ % မဖြစ်နိုင်ပါဘူး..။ဓါတုလက်နက် နဲ့ပတ်သတ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတယ် ဆိုတာကို မူတည်ပြီး ကိုယ်ထင်ရာတွေးယူနေကြတာက အမှားဆုံးပါပဲ..။စစ်လက်နက်ဆိုတဲံနေရာမှာ ဘက်မျှစွာတပ်ဆင်မှု ဆိုတာကို စဉ်းစားပြီးမှ တပ်ဆင်ရတာပါ..။
ဥပမာ-နူကလီးယားပိုင်ဆိုင်လာပြီဆိုရင် သူများကိုမတိုက်ခင် ကိုယ့်လက်နက်ကို ကာကွယ်ရမှာ ဦးစားပေး-၁
ပါပဲ..။အဲဒါကို မထိဖို့အတွက် လေကြောင်းစနစ်လိုအပ်လာပြီ..ပြီးရင်ရေပြင်စနစ်လိုအပ်လာပြီ..။နောက်အများ
ကြီးပေါ့ဗျာ...။ကျနော်တို့ နိုင်ငံ စစ်တပ် အကြောင်း ပြောဆိုနေကြတယ်.။ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ လက်နက်တွေဆိုတာ တခြားနိုင်ငံတွေလို ဒေသတွင်း ခြိမ်းခြောက်ဖို့ မဟုတ်ဘူး.နယ်စပ်ဒေသပြဿနာမှာ မသုံးဘူး..။
အခုလက်ရှိဖြစ်နေတာကို ပြည်တွင်းစစ်ရယ်လို့ဘယ်သူလက်ဆော့ခဲံ့လဲမသိဘူး..။အားလုံး ဒီစကားလုံးသုံးနေကြတယ်..။တကယ်တော့ နယ်စပ်ဒေသပြဿနာ ပါ..။ပြည်တွင်းစစ်မဟုတ်ပါဘူး..။
ကျနော်တို့ တွေ အသိခေါက်ခက် အဝင်နက်နေကြတယ်..။ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ ကြုံရတဲ့ သက်ကြီးပိုင်းတွေ သိကြတယ်..။သမိုင်းပြန်လန်ပြောနေရင် ရှည်နေပါ့မယ်..။လွပ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းကာ
KIA တွေနဲ့ ကျနော်တို့ တိုက်ပွဲတွေကြားမှာ ကြားညှပ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေရှ်ိတယ်..။
အဲဒါတွေကို ကျနော်တို့ ညှာတာနေရတယ်..ဒီတော့ လက်နက်တွေဆိုရင်တောင် မာနယ်ပလော/ဝါခသစ် တိုက်ပွဲ
တွေ တိုက်တုန်းကလောက်တောင် အိုဗာလုတ်(overload)တွေ မသုံးဘူး..။
ကျနော်တို့ ကချင်ဒေသတိုက်ပွဲစဉ်တွေမှာ တကယ်တမ်းသုံးရမယ်ဆိုရင် 155 ဟောင်ဝစ်ဇာ တွေ အစုံလောက် အတန်းလိုက်တောင် ပြိုင်ပြီးပစ်လို့ ရအောင် အခြေအနေတွေရှိနေပါလျက်နဲ့ မသုံးခဲ့ဘူး
သာမာန်တပ်ခွဲအကုပစ်တွေလောက်ပဲ များများသုံးပြီး တိုက်တာများတယ်..။မလိုအပ်တဲ့ ဆုံးရှူံးမှုတွေ
မရစေချင်လို့ပါ..။တိုက်ပွဲစတွေချိန်တုန်းက ကြားလိုက်ရပါသေးတယ်..။တိုက်ပွဲက အင်တာနက်ပေါ်ရောက်မလာလို့လူသိတာမရှိခဲံပါဘူး.ကျနော်တို့ လည်း တချို့ အကြောင်းတွေ အတိအကျ
မပြောနိုင်ပါဘူး..။စစ်တပ်ရဲ့အင်အား ၁၀ယောက်ကျော်နဲ့ KIA အင်အား ၄၀နီးပါးတို့ တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်..။
လက်နက်ကြီးပစ်ကုယူမယ်ကြံတော့ ရွှာနဲ့နီးတဲံအတွက် စစ်သည် ၂ ယောက်အကျခံပြီး ၃ ယောက် ဒဏ်ရာရနဲ့ အတင်းတက်တိုက်ခဲ့ရတယ်..။တကယ်ဆိုလက်နက်ကြီးပစ်ကူယူရင် ၃လုံးလောက်ဆို ကောင်းကောင်း ထိန်းနိုင်တဲ့အနေအထားပါ..။ဒါကို သိပေမဲ့ ရွာကိုငဲ့ပြီး တမင်အသေခံတိုက်ခဲ့ရတယ်.။
အရင်တုန်းကလည်း ဓါတုမိုးရေလို့ဆိုပါတယ်..အဝါရောင်အပြောက်တွေလည်းဟင်းရွှက်တွေပေါ်ကျနေပါတယ်လို့ အော်ခဲ့ပါသေးတယ်..တကယ်တမ်းလေ့လာကြည့်တော့ ရာသီပြောင်းငှက်တွေရဲ့ ချီးတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်..
အခုတစ်ခါလည်း ပုံနဲံတကွ ဓါတုလက်နက်လို့ တင်ထားပါတယ်..။
ဟာသပါ..။ပုံမှာတော့ ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနဲ့ ဓါတ်ခွဲစစ်တယ်ပေါ့ဗျာ..။
တထိုင်တည်း ပုံကြည့်ပြီး ပြောပြသွားပါ့မယ်..။
ROCKET က နှစ်မျိူးရှိနိုင်ပါတယ်..။
ပထမ တစ်မျိူးက 84mm ထဲထည့်ပစ်တဲ့ ဒုံးပါပဲ..
ကျနော်တို့ စီစီဝမ်တာပန်တိုက်ပွဲကြီးမှာတောင် တခါသုံးဖူးပါတယ်..အရမ်းကြီးလည်း အိုဗာမဖြစ်ပါဘူး..ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပေါ့နော်..။တိုက်ပွဲပေါ်မှာတော့ အတော်လေးထိရောက်ပါတယ်..။
ပစ်တဲ့ဒုံးအများကြီးရှိပါတယ်..။အဲင်္ဒီအထဲကမှ ခွင်းဒုံး (ဒါမှမဟုတ်) လေကွဲကျည် ဖြစ်ပါတယ်..။
လေကွဲကျည်ဆိုတာက အပေါ်ကပုံမှပြထားတာမဟုတ်ပါဘူး..သူက အဲထက်နည်းနည်းကြီးတယ်..။
ကျနော်တို့ လိုချင်တဲံနေရာကိုတိုက်ရိုက်ပစ်တယ်ပေါ့နော်.RPG ပုံစံပါပဲ..ဒါပေမဲ့ သူက အရာဝတ္ထုကို တိုက်ရီုက်မထိပါဘူး.ပစ်တဲံနေရာကနေ ပေါက်ကွဲချင်တဲ့ အကွာဝေးမှာ ဒုံးကို သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်.ပစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒုံးက အဖြူတန်းကြီး နဲ့အတူထွက်သွားပြီး ပေါက်ကွဲချိန်မှာ မီးပွင့်ကာ မီးခိုး အဖြုနဲ့အမည်း ထွက်လာပါတယ်..လေပေါ်မှာတင်ကွဲသွားတာပေါ့ဗျာ..
ရှင်းအောင်ပြောရရင် ဟိုဘက်တောင်ပေါ်မှာ အပေါ်ပိုင်းအကာကွယ်မဲံ့နေတဲ့ ရန်သူရှိတယ်.အဲဒါကို ဒီဘက်တောင်ကနေ သူတို့ ထိုင်နေ-မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ နေရာကိုတွက်ချက်ပြီး အဲဒီနေရာ ရန်သူတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်လူ၂ရပ်၃ရပ်စာလောက်ကို ချိန်ပစ်လိုက်တာပါ.ဒုံးက ရန်သူအပေါ်လည်းရောက်ရော.ဒုံးကွဲပြီး အပေါ်ပိုင်း အကာကွယ်မဲံတဲံရန်သူတွေ ကိုထိခိုက်စေတာပါ..
အခုမှမဟုတ်ပါဘူး..ဒုတ်ိယကမ္ဘာစစ်မှာတောင်သုံးခဲံတယ်..ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာဆိုလည်း စိစိဝမ်တာပန်တိုက်ပွဲကြီးမှာသုံးခဲံတယ်..မူရင်းထုတ်တာက ဆွီ်ဒင်ကပါ..။အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ.
84 mm အရင်ပုံဟောင်းပါ.အခုမသုံးတော့ပါဘူး.ဆင်တူတာလေးဖော်ပြလိုက်တာပါ-ဆွစ်-ထုတ်ပါ
ဒါကိုမမြင်ဘူးတဲ့ မသိတဲ့ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ မရှိတဲ့ KIA က သူရဲ့ ရဲဘော်တွေကိုရော ကချင်လူထုကိုရော လှည့်စားဖို့ကောလဟာလတွေလျှောက် လုပ်နေတာပါ..။
အပေါ်မှာပြထားတဲ့ သူတို့တွေရထားတဲ့ဆိုတဲ့ဟာက သာမာန်ဒုံးပါပဲ..။
သူတို့ပြတဲ့ဒီပုံကတော့ ၈၄ မျိူးဆက်(သို့မဟုတ်)နောက်ပွင့်ရိုင်ဖယ်မျိူးဆက်သစ်တွေထဲက နောက်မှ ပုံစံပြောင်းထားတဲ့ တင့်ဖျက်နဲ့ဘန်ကာဖြိူ ဒုံးပါ
ဒါကလည်း မီးခိုး အဖြူနဲ့မည်းပေါင်းထွက်ပါတယ်..ပြောပြီးသလို ဘန်ကာဖြိူတာပါ..ပစ်မှတ်(ဒါမှမဟုတ်)မြေပြင်.သစ်ပင် လို့ မာကျောတဲ့ အရာကို ထိမှ ပေါက်ကွဲတာပါ.။
တိုက်ရိုက်ဝါးလုံးထိုးပြေးသလို.သာမာန်အမြောက်ကျည်လို ၄၅ ဒီဂရီထောင်တတ်ပြီးမှ အောက်ပြန်စိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ ၂ မျိုး သွားပါတယ်..။
တိုက်ပွဲထဲမှာဗျာ ဗုံးငွေ့ ရှူရုံနဲ့ မူးတယ် အော့အန်တယ်.သတ်ိလစ်တယ်ဆိုတာ ကတော့ စစ်တိုက်ဖူးသူတိုင်း ကြုံဖူးပါတယ်..ကျည်ကျတဲံနေရာမပြောနဲ့ အမြောက်-/-RPG ပစ်တဲ့ လူတောင် ကိုယ့်လက်နက်က ထွက်တဲ့
ယမ်းငွေ့နဲ့ကိုယ် မူးတတ်ပါတယ်..ခန္ဒာကိုယ်အားနည်းတဲ့ လူဆိုမူးပြီးမေ့လဲတတ်ပါတယ်..။သင်တန်းကျောင်းတွေမှာ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်လေ့ကျင်းခန်းတွေမှာဆိုရင် အားနည်းနေတဲ့သင်တန်းသားတွေတောင် အငွေ့ရှူပါများလာရင် မူးတတ် နုံးချိတတ် အန်တတ်ပါတယ်..။ဒါသဘာဝပါ..။
ပစ်တဲ့လူတောင် ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကျည်ကျနေရာက လူဆို စဉ်းစားပေါ့ဗျာ..ဒါက ယမ်းပေါက်ကွဲမှု ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု နည်းနည်းလေးပါပဲ..။ရုရှားနိုင်ငံမှာ ဓါတုဗေဒနဲ့ ပညာတော်သင်တတ်နေတဲံ အရာရှ်ိတစ်ယောက် ပြောတာကတော့ ရှင်းပါတယ်..ယမ်းမူန့် တထုပ်လောက်မီးရှိ့ပြီး ရှူကြည့်ပါလားတဲ့.။
တကယ်တော့ KIA ဆိုတာ ဘာမှ ဟုတ်္တိပတ္တိ မဟုတ်ပါဘူး..ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်နေတုန်းကာလမှ မှောင်ခိုငွေတွေနဲ့လက်နက်ခိုးဝယ်ပြီး အင်အားပြလူစု ထားတာလောက်ပဲရှိတာ..တကယ့်တကယ်ကျတော့ဘာမှ ပြောပလောက်အောင် စာတင်လောက်အောင် ဇ ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ လည်း တပ်မ ၈၈ က တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ယောက်ကလည်း ပြောပါတယ်..။
အစိုးရပြောသလို ၁ ရက်ထဲနဲ့တောင် တိုက်လို့ ရနိုင်ပါတယ် လို့ လည်းပြောပါသေးတယ်..။သူတို့ ကတော့ လိုင်ဇာကိုတောင် သိမ်းပိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီး အမိန့် ကိုစောင့်နေကြတယ်လို့ ထပ်ပြောပါသေးတယ်..။
ဒီလောက်တပ်ခွဲအကုပစ်(တိုက်ရိုက်ချိန်-အနီးကပ်ပစ်)တဲ့လက်နက်ကြီးတောင် မခံနိုင်-မြင်လည်းမမြင်ဘူး.ကြောက်လန့်တကြားအော်နေတဲ့ KIA ကိုသာ တကယ့်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကြီးများလို OVERLOAD များနဲ့တိုက်ရင် အသံနဲံတင် လက်နက်ချ သွားလောက်ပါတယ်..
သို့ သော် အစိုးရမှလည်း မိမိတိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း နှိပ်ကွပ်တယ်ဟူသော အပြောမျိူး မခံချင်လို သောကြောင့် ၄င်းတို့ ဘက်မှ အင်အားများများမသုံးပဲ ရင်ဆိုင်တပ်အင်အားနဲ့စိုးမိုးအင်အားလောက်သာ သုံးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။
တကယ်တော့ ဓါတုလက်နက် ဆိုတာ KIA တို့ရဲ့မျက်ကလူးဆန်ပြာ အော်ခြင်းနှင့်ကချင်လူထုကိုအယုံသွင်း ဝါဒမိုင်းတိုက်နေခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်း ဤနေရာကနေဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်..။
(FBမှ ဆွေးနွေးအကြံပေးသော အကို Tearless Sniper အား ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ)
ရေးသားသူအဖွဲ့=
12/1/11, 6:43 PM
မိတ်ဆွေတို့ ၏ ဆွေးနွေးမူ ဝေဖန်မူ အား လိူက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။သင်တို့၏ ဝေဖန် အကြံပေးမှူတို့အား ဖော်ပြခွင့်ရရန် ခေတ္တ စောင့်ဆိုင်းပါ ။
ကြိုဆိုသူများနဲ့ အင်တာဗျူး တပ်မ၄၄+KNLAတပ်မ၁နဲ့သရုပ်ဆောင်တို့ရဲ့
ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းနှင့်ကေအိုင်အိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ အံဖွယ်၃နှစ်ကလေးရဲ့မွေးရာပါ ပါရမီ
88 ခေါင်းဆောင်တွေ ဒီလိုနည်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်
သွေးကင်ဆာကို ၁၀ ရက်အတွင်း ပျောက်အောင် မြန်မာအမျိုးသမီးဆရာဝန်နှစ်ဦး ကုသခဲ့ပြီ